आज सुनको मुल्य कति? - Himal Dainik
आज सुनको मुल्य कति?
काठमाडौँ १० फाल्गुन २०७७, सोमबार १२:३०
स्थानीय बजारमा पहेंलो धातुको मूल्य आज स्थिर रहेको छ । आइतबार प्रति तोला ८९ हजारले कारोबार भएको सुन सोमबार पनि त्यही मुल्यमा कारोबार हुने नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
त्यस्तै आज चाँदी ५ रुपैयाँले बढेको छ । आइतबार प्रति तोला १ हजार ३३० रुपैयाँले कारोबार भएको चाँदी आज ५ रुपैयाँले बढेर १ हजार ३३५ रुपियाँ पुगेको छ। फाल्गुन महिनाको पहिलो दिन प्रति तोला ९० हजार ८ सय रुपैयाँले कारोबार भएको सुन दोश्रो हप्तामा आइ पुग्दा १८ सय रुपियाँले घटेको छ ।
अघिल्लोअझै १२ कम्पनिको आइपीओको आउदै!
पछिल्लोसरकारले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई दवाव दिँदैनः उपप्रम पोखरेल